I-Calorie Control Council (CCC) - amaqiniso asemqoka - Ilungelo Lokwazi lase-US
I-Calorie Control Council (CCC) - amaqiniso asemqoka
Posted on January 17, 2015 by UGary Ruskin
* Ikhalori Yokulawula Umkhandlu yiqembu lezentengiselwano labakhiqizi bezithambisi zokwenziwa
* I-CCC "inesifiso samasu amaqhinga okuxhumana nomphakathi"
* I-CCC iphethwe yinkampani yezobudlelwano bomphakathi, "isebenza kakhulu njengeqembu eliphambili lezimboni kunenhlangano yezohwebo"
* Ifemu ye-PR esebenza ngeCCC imele abakhiqizi be-asbestos, izinkampani zikawoyela, iMonsanto, abakhiqizi bomlilo nabanye
* Uqhuba izifundo zakhe zezempilo, usule ireferensi yezifundo ku- "mutagenicity," "carcinogenicity" kusuka kuwebhusayithi
* I-CCC isebenzisa amaqhinga okusabisa kubacwaningi bezemfundo
* Isikhalazo se-International Dairy Foods Association esivikelwe ukufaka ama-sweeteners okufakelwa obisini ngaphandle kwelebuli eyengeziwe
* Ucwaningo oludlalwe phansi oluhambisana nokusetshenziswa kwesoda yokudla ngokuzalwa ngaphambi kwesikhathi
* Isicelo esikhokhelwe sokususa i-saccharin kuhlu lwe-FDA lwama-carcinogens
ICalorie Control Council iyiTrade Group yabenzi bama-Artificial Sweeteners
Ngokwe-website yayo, iCalorie Control Council imele abakhiqizi nabaphakeli bokudla neziphuzo ezinamakhalori aphansi futhi ancishisiwe.
“ICalorie Control Council, eyasungulwa ngo-1966, iyinhlangano yamazwe omele imboni yokudla neziphuzo ezinama-khalori aphansi futhi ancishisiwe. Namuhla limelela abakhiqizi nabaphakeli bokudla neziphuzo ezinama-khalori aphansi futhi ancishisiwe, kufaka phakathi abakhiqizi nabaphakeli bezinye iziswidi ezihlukile ezingaphezu kweshumi nambili ezihlukile, imicu namanye amakhalori aphansi, izithako zokudla. ” [Iwebhusayithi yeCalorie Control Council, caloriecontrol.org, ifinyelelwe ngomhla ka-12/19/14]
I-CCC Ine- "penchant for Stealthy Public Relations Tactics"
Ngokusho kweCentre for Public Integrity, iCalorie Control Council “iyiqembu lezimboni elaziwa kancane elinegama elizwakala lingenabungozi, elinomlando omude futhi elithanda izindlela zobuqili zokuxhumana nomphakathi.” [Isikhungo Sobuqotho Bomphakathi, 8/6/14]
I-CCC Iqhutshwa yiFirm Firm, “Njenge-Industrial Front Group kune-Trade Association”
Ngokusho kweCentre for Public Integrity, i-CCC “iphethwe yisikhulu esiphezulu se-akhawunti esinenkampani ephethe umhlaba wonke kanye nezobudlelwano bomphakathi, imele imboni yokudla neziphuzo enama-khalori aphansi futhi ancishisiwe. Kodwa isebenza kakhulu njengeqembu eliphambili lezimboni kunenhlangano yezohwebo. ” [Isikhungo Sobuqotho Bomphakathi, 8/6/14]
UMongameli weCCC nguHaley Stevens, oyi-Executive Executive kwaPR Firm
UHaley Stevens ungumongameli weCalorie Control Council. [Ikhalori ye-Calorie Control Council]
UStevens empeleni ungumphathi we-akhawunti wenkampani ye-PR iKellen Company. [Iwebhusayithi yeKellen Company]
UStevens ubuye abe yiFace Yamanye Amaqembu Angaphambili Amelwe nguKellen
Ngaphezu kwemisebenzi yakhe njengesikhulu se-akhawunti ye-Kellen Company kanye nomongameli weCalorie Control Council, uStevens ubuye asebenze njengoMqondisi oMkhulu we-International Food Additives Council, iklayenti leKellen Company. [I-Foodadditives.org, UKellen Webinar]
UStevens wake wasebenza phambilini - futhi angaqhubeka nokusebenza - njengo “Specialist Affairs Specialist” woMkhandlu Wamafomula Womhlaba Wonke, omunye uKellen Client. [Iwebhusayithi yeKellen Company; New York Daily News, 9 / 26 / 11]
IKellen Group Imelela Amanye Amaklayenti, Amaqembu Angaphambili
Ngaphezu koMkhandlu Wokulawula Amakhalori, i-International Food Additives Council kanye ne-International Formula Council, i-Kellen Group kanye nenkampani engaphansi kwayo, iKellen Adams, basebenzela amanye amabhizinisi, izinhlangano namaqembu angaphambili, kufaka phakathi:
I-American Chemistry Council: I-American Chemistry Council iyinhlangano yezohwebo emele abakhiqizi bamakhemikhali. [Iwebhusayithi kaKellen Adams; Iwebhusayithi yeAmerican Chemistry Council]
I-American Petroleum Institute: I-American Petroleum Institute (API) ukuphela kwenhlangano yezohwebo kazwelonke emele zonke izici zemboni yaseMelika kawoyela negesi yemvelo. Le nhlangano ingumbutho onamandla wokufuna usizo, isebenzisa cishe amaRandi ayizigidi ezingama-40 ekunxenxeni kusukela ngo-2010. Iphinde ixhase amaqembu afana namaMelika ukuze achume. [I-American Petroleum Institute; Iwebhusayithi kaKellen Adams; Isikhungo Sokuphendula Kwezepolitiki ukunxenxa imininingwane; Isikhungo Sezepolitiki Esabelayo - AmaMelika Wokuchuma]
I-American Pyrotechnics AssociationI-American Pyrotechnics Association isebenza ukuvimbela ukuvinjelwa kweziqhumane eziyingozi. [Inkampani yaseKellen iwebhusayithi]
Ukubumbana Kwe-Asbestos Compensation: I-Asbestos Compensation Coalition yiqembu eliphambili lezinkampani ezakha i-asbestos noma ezazenza ngaphambili. [New York Times, 8 / 28 / 82; Iwebhusayithi yeKellen Company]
IMonsanto: IMonsanto ingenye yezinkampani ezinkulu kwezolimo emhlabeni. [Iwebhusayithi kaKellen Adams; Monsanto.com; ]
I-CCC Iqhuba Izifundo “Zesayensi” Kukudla Okune-Kalori Ephansi…
Ngokuya ngewebhusayithi yayo, iCCC yenza ucwaningo lwayo lwesayensi ngokudla okuphansi futhi okuncishisiwe kwekhalori.
“Njengengxenye yale nhloso, ukunakwa ngokucophelela ocwaningweni lwezesayensi kube yitshe legumbi loMkhandlu selokhu lasungulwa. UMkhandlu uxhase ucwaningo oluningi ngezithako ezinama-khalori aphansi futhi ancishisiwe, ukudla neziphuzo-kubandakanya ukuphenywa kokuphepha kwezithako, ukusetshenziswa kwabathengi kanye nemibono yomphakathi. ” [Iwebhusayithi yeCalorie Control Council, caloriecontrol.org, ifinyelelwe ngomhla ka-12/19/14]
… Kepha Isusa Izinkomba Eziya kwizifundo ku "Mutagenicity, Carcinogenicity" ye-Low-Calorie Foods kwiWebhusayithi yayo
NgoSepthemba 2009, i-Calorie Control Council yahlela ikhasi layo ukuze isuse izinkomba ezifundweni zayo mayelana ne "mutagenicity" kanye "ne-carcinogenicity" yokudla okunama-kilojoule amancane.
“Njengengxenye yale nhloso, ukunakwa ngokucophelela ocwaningweni lwesayensi bekuyinsika yoMkhandlu selokhu wasungulwa. UMkhandlu uxhase ucwaningo oluningi ngezithako ezinama-khalori aphansi, ukudla neziphuzo-kufaka phakathi uphenyo ezindaweni ezithinta amandla omzimba, i-carcinogenicity, imetabolism, ukusetshenziswa kwabathengi nemibono yomphakathi. ” [Iwebhusayithi yeCalorie Control Council nge archive.org, 8 / 20 / 09 vs. 9 / 21 / 09]
Isebenzisa Amaqhinga Okusabisa Abacwaningi Abakhomba Izingozi Zezempilo Ezihlotshaniswa Nezithambisi Zokwenziwa
Ngo-2013, umcwaningi wasePurdue University uSusan Swithers washicilela isibuyekezo esihlokweni ukukhombisa imithelela emibi yezempilo kubantu abaphuza njalo ubumnandi bokufakelwa, kufaka phakathi ingozi eyengeziwe yokuthola isisindo ngokweqile, uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2, nesifo senhliziyo.
ICalorie Control Council ithumele i- Incwadi ukuze iPurdue ifune ukuthi inyuvesi iyeke “ukuthuthukisa isayensi echemile.”
“Amaqhinga okusabisa, aya kumqashi womuntu, kubukeka sengathi adlulela ngaphesheya kwendawo enengqondo,” kusho uSwithers. [Isikhungo Sobuqotho Bomphakathi, 8/6/14]
Izingozi Zezempilo zeCCC ze-Aspartame kanye ne-Artificial Sweeteners…
“Kodwa okhulumela imboni enamakhalori aphansi ubelugxeka kakhulu lolu cwaningo, ephawula ukuthi lolu cwaningo luthinta amagundane angama-27 kuphela. "Ngicabanga ukuthi izifundo ezinjengalezi zilimaza umthengi ngoba zenza zibelula izimbangela zokukhuluphala," kusho udokotela obhalisiwe wezokudla uBeth Hubrich weCalorie Control Council etshela iWebMD. “Kuyiqiniso ukuthi kube nokwanda ekusetshenzisweni kwamakhemikhali anama-low-calorie ngasikhathi sinye lapho sibone khona ukwanda kokukhuluphala, kodwa futhi kube nokwanda ekusetshenzisweni komakhalekhukhwini futhi akekho ophakamisa ukuthi zibangela ukukhuluphala. ” [Izindaba ze-CBS, 2/11/08]
… Ngenkathi iSifundo Sango-2005 Sabona Ukuxhumana Phakathi Kwe-Aspartame Nomdlavuza Kumagundane
Ngo-2005, isifundo esashicilelwa ephephabhukwini i-Environmental Health Perspectives sakhombisa ukuxhumana phakathi kwe-aspartame nomdlavuza kumagundane elebhu.
“Ucwaningo olwenziwe kumagundane luxhumanisa i-aspartame ethandwayo yokufakelwa nohlobo oluningi lomdlavuza, kodwa abaphathi bezimboni basola ukuthi lolu cwaningo lunamaphutha amabi. I-Aspartame itholakala ku-sweetener enama-khalori aphansi i-Equal nakweminye imikhiqizo eminingi engenashukela ngaphansi kwegama lomkhiqizo i-NutraSweet. Ungumnandi wesibili ongathengiswa kakhulu emhlabeni. Abaphenyi e-Italy baphetha ngokuthi amagundane adalulwe ngemithamo ehlukahlukene ye-aspartame ezimpilweni zabo zonke athuthukisa ama-leukemias, ama-lymphomas, namanye amagciwane omdlavuza ngendlela encike kumthamo. Lolu cwaningo luvela kumagazini kaNovemba 17 wephephabhuku i-Environmental Health Perspectives, elishicilelwa yiNational Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) loMnyango Wezempilo kanye Nezinsizakalo Zabantu e-US. ” [Izindaba zeWebMD Health, 11/18/05]
Umphumela Owehliselwe Phansi Wocwaningo Okhombisa Ukudla Ukusetshenziswa Kwesoda Okunikelwe Ekuzalweni Kwangaphambi kwesikhathi
NgoJulayi 2010, uMqondisi Omkhulu weCalorie Control Council uBeth Hubrich wayibukela phansi imiphumela yocwaningo olusha olukhombisa ukuxhumana phakathi kokudla i-soda kanye nokuzalwa ngaphambi kwesikhathi, ethi imiphumela ingabethusa kakhulu abesifazane abakhulelwe.
“Ucwaningo olusha luphakamisa ukuthi ukuphuza iziphuzo eziningi ezenziwe ngoshukela kungaxhunyaniswa nobungozi obandayo bokuzalwa ngaphambi kwesikhathi. … Esitatimendeni, iCalorie Control Council, iqembu eliletha izinkampani ezenza nokusabalalisa ukudla okunama-khalori aphansi, libize lolu cwaningo “ngokudukisayo. ' “Lolu cwaningo lungabethusa ngokungafanele abesifazane abakhulelwe. Yize lolu cwaningo luphikisana nesisindo sobufakazi besayensi obukhombisa ukuthi iziphuzo ezinamakhalori aphansi ziphephile ukuthi zingasetshenziswa ekukhulelweni, ucwaningo lukhombisile ukuthi ukukhuluphala ngokweqile nokukhuluphala ngokweqile kungathikameza imiphumela yokukhulelwa, ”kusho uBeth Hubrich, ingcweti ekudleni nomkhandlu, isitatimende. "Ngaphezu kwalokho, iziphuzo ezinamakhalori aphansi zingasiza abesifazane abakhulelwe ukuba bajabulele ukunambitheka kwamaswidi ngaphandle kwama-calories amaningi, kushiya indawo yokudla okunomsoco neziphuzo ngaphandle kokuzuza ngokweqile - into ekhonjiswe ukuthi iyingozi kumama nakumntwana osakhulayo." [Reuters, 7 / 23 / 10]
Isekela Ukusebenzisa Okunambithekwayo Kwenziwe Ubisi ngaphandle Kwelebula Eyengeziwe
Ngo-2013, iCalorie Control Council yavikela isicelo sango-2009 se-International Dairy Foods Association sokuvumela ukusetshenziswa kwamakhemikhali okwenziwa obisini ngaphandle kwezidingo ezengeziwe zokufaka ilebula ngaphezu kokufaka okokunandisa ohlwini lwezithako.
“Muva nje, iDoctor Oz ikhombise isigaba mayelana nokusetshenziswa kwamakhemikhali aphansi obisi olunothile neminye imikhiqizo yobisi futhi yenze izinsolo eziningana ezingenasisekelo. Ingxenye yayigxile esicelweni esanikezwa i-FDA emuva ngo-2009 yi-International Dairy Foods Association (IDFA) kanye neNational Milk Producers Federation (NMPF) ecela imvume yokunikeza ezinye izindlela zoshukela ezincishisiwe kumikhiqizo yobisi enongwe, njengobisi lwe-chocolate , ngaphandle kwesimangalo selebuli esingeziwe njenge "ikhalori elincishisiwe" noma "akukho ushukela ongeziwe." Kubalulekile ukuqaphela ukuthi imikhiqizo esebenzisa isiphuzo esinamakhalori aphansi isazobizwa kanjalo ohlwini lwezithako. ” [Ukukhishwa kwabezindaba zeCalorie Control Council, 4/1/13]
Isicelo seCCC Led ngo-2003 sokususa iSaccharin kuhlu lwamaCarcinogens
Ngo-2003, iCalorie Control Council yahola isicelo somkhakha wezokudla sifuna ukususwa kwe-saccharin ohlwini lwama-carcinogen we-Environmental Protection Agency, isicelo esanikezwa ngo-2010.
“I-EPA isiqedile umthetho wayo wokususa i-saccharin - iswidi yokufakelwa ejwayelekile etholakala ekudleni iziphuzo ezibandayo, ushingamu kanye nejusi - nosawoti wayo ohlwini lwezinto ezinobungozi zale nhlangano. Ngesimemezelo sangoDisemba 14, i-EPA inikezela ngesicelo semikhakha seminyaka eyisikhombisa esiphikisa ukuthi imininingwane yesayensi ikhombisa ukuthi okufakiwe kokudla akulimazi njengoba kwakucatshangwa. I-EPA phambilini yayifake i-saccharin kuhlu lwayo lwezinto ezinobungozi kanye nemfucumfucu ngenkathi uhlu lwenziwa ngo-1980 ngoba iFood & Drug Administration yayikade iphothule ukuthi okufakiwe kwakuyingozi yomdlavuza womuntu, iqembu lezimboni iCalorie Control Council (CCC) labhala ngo-2003 isicelo. ” [Umbiko weSuperfund, 12/27/10]
I-CCC Iphushelwe Ukuguqulwa KweBan ku-Cyclamate Sweetener ngawo-1980
Ngo 1984, Forbes ibike ukuthi iCalorie Control Council ibisebenza ukuguqula ukuvinjelwa kwe-1969 ku-cyclamate yokufakelwa.
“Futhi-ke kukhona i-cyclamate, engahle inganiki uSearle ngisho iminyaka emithathu yegumbi. Kusukela ngo-1969, lapho i-FDA ivimbela i-cyclamate ngoba kuthiwa ibanga umdlavuza kumagundane nasemagundwini, omunye wabakhiqizi be-cyclamate, i-Abbott Laboratories, neqembu lezimboni elibizwa ngeCalorie Control Council bebelokhu bekhankasela ukuguqula lesi sinqumo. Ngo-1980 i-FDA yabuye yazenqaba izimangalo zika-Abbott. Kepha ngo-Ephreli odlule ikomidi lokuhlola umdlavuza le-FDA ligcine liguqule inkambo, lacela ukuthi iNational Academy of Sciences yenze isibuyekezo esijulile. Indlela manje ibonakala ivulekile ukuthi i-cyclamate iphinde ingene emakethe ngasekupheleni kuka-1985. ” [Forbes, 8/27/84]
Ukudla Okucatshangwayo, Abathandekayo Abbott Laboratories, I-American Chemistry Council, I-American Petroleum Institute, Inhlangano yaseMelika Pyrotechnics, AmaMelika Wokuchuma, API, Ukubumbana Kwe-Asbestos Compensation, UBeth Hubrich, Ikhalori Yokulawula Umkhandlu, CCC, EPA, UHaley Stevens, IDFA, I-International Dairy Foods Association, Umkhandlu Wezithasiselo Zokudla Womhlaba Wonke, Umkhandlu Wefomula Wamazwe Omhlaba, UKellen Adams, Inkampani yaseKellen, Monsanto, Inhlangano Yabakhiqizi Bobisi Kazwelonke, I-NMPF